PDF Ọkachamara ọkachamara, n'efu maka obere oge | Esi m mac
Faịlụ dị n'ụdị PDF aghọwo nri anyị kwa ụbọchị. Iji jikwaa akwụkwọ niile dị n'ụdị a na-agafe n'aka anyị na Mac App Store anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ndị na-enye anyị ohere ịme nke ahụ, ọtụtụ n'ime ha maka ịkwụ ụgwọ na ọnụahịa ndị karịrị ego nke ọtụtụ ọrụ. The PDF Suite Professional ngwa na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ na faịlụ na usoro a ekele maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ọrụ ọ na-enye anyị, dị ka ohere nke ịkọwapụta, akara, ijikọ akwụkwọ, kewapụ ha, ịtụgharị faịlụ site na PDF ka Ọkpụkpọ Okwu .. . PDF Ọkachamara Suite nwere ọnụahịa oge niile nke euro 39,99, mana maka obere oge anyị nwere ike ibudata ya n'efu.
Ngwa a, na mgbakwunye na ngwaọrụ niile ọ na - etinye n'aka anyị iji mee mgbanwe ma ọ bụ nkọwa ọ bụla, na - enye anyị ohere iji ya dịka ngwa iji mee ihe ngosi, na-enweghị ịgbanwe akwụkwọ ahụ na Powerpoint. Na mgbakwunye, dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ọ na - enye anyị ohere iji ngwa a gụpụta ederede nke faịlụ dị na PDF. Dị ka anyị pụrụ ịhụ, PDF Ọkachamara Suite na-enye anyị ọnụọgụ nhọrọ dị ukwuu iji nwee ike iji nwayọ rụọ ọrụ n'ụdị a ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ngwa ndị ọzọ iji kwado ya.
Ngwa a na - enye anyị ohere ịpịkọta faịlụ ndị ahụ, na - ebelata ịdị arọ nke ihe onyonyo ahụ, were nseta ihu na - ele anya n'ihu nke akụkụ kachasị mkpa nke akwụkwọ, tinye paswọọdụ, machibido edezi faịlụ, dakọtara na mmecha ụdị na mgbakwunye inye anyị ohere gbanwee PDF faịlụ na Okwu, Peeji, HTML, JPG na PNG. PDF Professional Suite dị na Spanish, chọrọ OS X 10.7 ma ọ bụ mgbe e mesịrị na 64-bit processor. Ọ dakọtara na retina ngosipụta nke Macs.
PDF Ọkachamara-Annotate, Banyefree
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » PDF Ọkachamara ọkachamara, n'efu maka obere oge
O bu n’asusu bekee?
Jorge Ortiz kwuru dijo
Daalụ, ọ dị m mma. Ikekọrịta.
Zaghachi Jorge Ortiz
Ọ bụ n'ọtụtụ asụsụ, gụnyere Spanish.
Mana n'ezie isiokwu nke isiokwu a ezighi ezi, ebe ọ bụ aghụghọ nke ụlọ ọrụ "Mee ka Jikọọ, Inc.": aha nke ụdị a na - akwụghị ụgwọ bụ "Ọkachamara Ọkachamara - Ọfịs PDF Nke Onwe Gị!" (Dị ka njikọ na njedebe nke akụkọ ziri ezi na-ekwu).
Ma aha nke ụdị ahụ dabara na aha akụkọ ahụ abụghị n'efu ("PDF Professional Suite -C Customized PDF Office!").
Na nkenke: "PDF Ọkachamara" bụ n'efu maka oge pere mpe, mana "PDF Ọkachamara Ọkachamara Suite" O nwebeghị mgbe nweere onwe ya. Ha nwere ike ịhụ akụkọ ihe mere eme ha na http://www.appshopper.com.